Philippines: Bolongana nampiseho zava-mahavariana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Desambra 2008 21:25 GMT
Any amin'ny firenena izay tsy mitsahatry ny mihena isan-taona ny tetibola atokan'ny fanjakana ho amin'ny fampianarana, dia maresaka fandre isaky ny fidiran'ny taon-tsekoly ny tsy fahampian'ny trano sekoly, na dabilio, na seza ankoatra ny zavatra hafa maro ihany koa. Mba enti-mamaha olana izany tsy fahampian'ny fitaovan-tsekoly izany dia voatery miankina aminn'y fanampiana ny sekolim-panjakana.
Toy izany no ataon'ny Lisea Sangat any an-tanànan'i San Fernando, Cebu raha nanolotra boky sy solosaina ho an'ny sekoly vao haingana tamin'ity taona ity ny fikambanana mpanome fanampiana iray tarihina mponina tany amin'io tanàna io taloha fa efa mipetraka any Etazonia kosa amin'izao fotoana izao.
Saingy indrisy moa, fa tsy nahita izay volombolon'izany fanampiana izany akory ny mpianatra tokony iantefan'ny fanampiana tany amin'ity atsimon'i Philippines ity. Fa inona no nitranga?
Nisy sary maromaro ary naneho ny niafaran'ireo fanampiana ireo avy tamina bolongan'olo-tsy fantatra, Taga San Fernando[fil].
Boky nariana tamin'ny tany: Sary nopihan'i Taga San Fernando efa nahazo alalana.
Manazava i Taga San Fernando:
Ny solosaina, kojakoja, ary ny boky dia fanomezan'i Bless of Mind Foundation tarihan'ilay nipetraka teto San Fernando Ramatoa Racquel Kristina Enad (raha ny anarany no jerena). Nokasaina ho an'ny Lisea Sangat ireo.
Tonga tany amin'ny seranana iraisam-pirenen'i Cebu (CIP) tanin'ny 15 mey 2008 avy any Etazonia ireo solosaina, kojakoja miaraka aminy ary boky voalaza ireo ary nalefa ho an'ny sekoly. Tao anaty kontenera telo ireo rehetra ireo.
Tafavoaka ireo entana ireo noho ny fanampian'ny olom-pantatr'Atoa Nonoy Reluya, vadin-dRatoa Neneth Reluya Ben'ny tanànan'i San Fernando Mayor.
Nefa raha tokony hivantana tany amin'ny Lisea Sangat ny entana dia nivily ho any amin'ny lapan'ny tanàna ka nanomboka nifantina entana tao ny Ben'ny tanàna.
Raha nitaraina ny talen'ny Lisea Sangat Ratoa Glenna Plarisan, dia ren'ny haino aman-jery izany, tezitra ny Ben'ny tanàna ka nanome baiko hamindra ny entana ao anaty fiarabe mpandroaka fako ary hanary azy eo an-tokotanin'ny sekoly voalaza (na boky na solosaina).
Nahatezitra ny mpamaky ny famakiana izany tantara izany ka nihoatra ny 400 ny fanehoan-kevitra. Araka ny voalazan'ny tompon'ny bolongana, noho ny fahabetsahan'ny valinteny dia tsy nahazaka intsony ilay vohikala ka nahatonga azy hamindra ny fitantarany tamina bolongana faharoa[en] ary nafindrany ao ihany koa ny fitantarany [sy ny sary vitsivitsy].
Efa napetraka any amin'ny Biraon'ny Mpanelanelana (mpiaro ny olompirenena) moa ny fitoriana ny Ben'ny tanàna. Mandritra izany fotoana izany, dia namoaka ny mailakan'ny iray amin'ireo nandefa ny fanomezana tany amin'ny vadin'ny Ben'ny tanàna Reluya izay mpiaro azy rahateo ny manome heitra iray. Na izany aza, dia niteraka fanontaniana maro izany:
The pictures say more than a million words … please look at them closely.
* Nahoana no tsy nisy ny fanisana ny kojakojan'ny sekoly any San Fernando ?
* Miteny ny mpanohana anao fa tafahoatra ny sary. Te-hiIaza ve izy ireo fa namboarina ireny sary ireny? Lavinao ve ny filazana fa natsipy tamin'ny tany ny boky ? Moa ve tsy ny fiarabe mpitondra fako no nitondra ny solosaina, izay hita miharihary fa voasokatra sy nosaratsarahina ? hatao inona ? Hakana ny kojakoja ao anatiny ?
* Tahaka izao izany no fanomezanareo ny entana amin'ny omena azy ?
Ho an'Atoa Steve Enad : Moa ve tsy mahatsiaro ho afa-baraka ve ianao tamin'ny fomba nanaovana ireo fanomezana ireo tany ampahatongavana ?
Mahalaza noho ny teny 1 000 000 ireo sary ireo…Koa jereo tsara kely aza fady.